Kidnapping tao Maevatanàna: mitaky 250 tapitrisa Ar ireo naka an-keriny ilay vadina mpandraharaha | NewsMada
Kidnapping tao Maevatanàna: mitaky 250 tapitrisa Ar ireo naka an-keriny ilay vadina mpandraharaha
Par Taratra sur 24/08/2018
Nalain’ny jiolahy nirongo basy Kalachnikov sy basim-borona tao amin’ny fokontany Ambodimanga, distrikan’i Maevatanàna, ny vadina mpandraharaha iray, omaly vao maraina. Hatramin’ny omaly hariva, mitaky vola 250 tapitrisa Ar ireo jiolahy…
Mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy, hatramin’ny omaly hariva ny vadin’ilay mpandraharaha nalain’ny jiolahy an-keriny tao amin’ny fokontany Ambodimanga, distrikan’i Maevatanana, eo amin’ny 2,4 km miala ny tetezan’i Betsiboka. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, omaly vao maraina no niditra an-keriny nanafika ny tokantranon’ity mpandraharaha ity ireo andian-jiolahy niaraka tamin’n basy Kalachnikov sy basim-borona. Nampihorohoro tamin’ny basy avy hatrany ry zalahy raha vantany vao tafiditra tao an-trano, ny sasany kosa niandry teny ivelany. Nitaky vola tamin’ilay raim-pianakaviana mpandraharaha ry zalahy, saingy tsy nahazo ny vola notadiavin’izy ireo ka ny vadiny avy hatrany no nalainy an-keriny. Lasa nitsoaka ireo jiolahy niaraka tamin’ilay renim-pianakaviana ary tsy hita ny lalan’izy ireo hatramin’ny toerana nametrahany ilay ramatoa. Fotoana fohy taorian’izay anefa, niantso ilay mpandraharaha hanome vola 250 tapitrisa Ar izy ireo ho takalonaina raha tsy izany tsy avotsotr’izy ireo ilay renim-pianakaviana.
Efa any an-toerana ny polisy sy ny zandary…
Raha ny fampitam-baovao farany hatramin’ny omaly hariva, mbola tsy votsotra fa mbola any am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny ilay renim-pianakaviana. Nampandre haingana ny mpitandro filaminana kosa ilay mpandraharaha momba ity raharaha “kidnapping” ity. Raha ny fantatra efa miantrana any an-toerana ny polisy sy ny zandary ao amin’ny sampana miady amin’ny asa fakana an-keriny, saingy tsy mbola fantatra ny toerana misy ireo jiolahy. Andrasana araka izany, ny tohin’ity raharaha fakana an-keriny ity.
Lasa mahazo vahana indray ny fakana an-keriny rehefa tsy mahita irika any amin’ny fanafihana mitam-piadiana ireo jiolahy. Vao haingana no nisy ilay fakana an-keriny mpiasan’ny orinasa Kraoma tao Tsaratanana izay any akaikin’iny faritra iny ihany. Niafara tamin’ny fandoavam-bola mihitsy ny raharaha vao navotsotr’ireo mpaka an-keriny ireo ny mpiasa efa-dahy nalaina an-keriny. Tratra kosa ireo tompon’antoka tamin’ity fakana an-keriny ity. Ravan’ny zandary sy ny polisy ny herinandro teo koa ireo tambajotrana mpaka an-keriny saika haka teratany Karana iray teny Anosivavaka Ambohimanarina. Manao izay ho afany hatrany ny zandary sy ny polisy na eo aza ny tsy fahasahian’ny fianakaviana manatona azy ireo fa aleo manome sy/na mitady ny vola tadiavin’ireo jiolahy.